Curata: Ọdịnaya dị mkpa maka azụmaahịa gị. | Martech Zone
Satọde, Ọgọstụ 10, 2013 Tuesday, April 5, 2016 Douglas Karr
Curata bụ ngwanrọ ngwanrọ, na-enyere gị aka n'ụzọ dị mfe chọta, hazie ma kesaa ọdịnaya dị mkpa maka azụmahịa gị.
Nchịkọta ọdịnaya bụ nkà na sayensị nke ịchọta na ịkekọrịta ọdịnaya dị mma na otu isiokwu. Curation na - enyere gị aka wulite ndị na - ege ntị. Nwere ọtụtụ ndị mmadụ ị ga-eso ha kerịta ọdịnaya gị, ndị nwere ike ịgbasa okwu ahụ. site na Neicole Crepeau na nkwenye na tọghata
chọta - Curata na-enyocha weebụ iji chọpụta ọdịnaya dị mkpa maka azụmahịa gị. Ikpo okwu na enyere gị aka ịchọpụta ọdịnaya dị n'ịntanetị na nke bara uru, nụchaa ma jikwaa ọdịnaya ahụ site na ịmegharị na ịghaghachi isi mmalite ma bulie ya
nchoputa - ihe ichoro ichoro di ka ntanetiri.
haziri - Katalọgụ ọdịnaya ọgụgụ isi nke mere na ị pụrụ ịchọta ihe ị na-achọ. Enwere ike ịhazi ọdịnaya ahụ ma hazie ya ka ọ dịrị mfe ịnweta ya iji kwalite SEO na ndị na-ege gị ntị. Ka oge na-aga, ikpo okwu na-ewuli ebe nchekwa ọdịnaya iji mee ka njikarịcha njin ọchụchọ gị.
Share - Na-ekesa ọdịnaya otu, ụfọdụ ma ọ bụ ebe niile ị na-aga na ntanetị. Can nwere ike ịkọwapụta, hazie ma kwuo maka ọdịnaya gị edozi, bipụta ya na ndị na-ege gị ntị mgbe, ebe na otu ị si ahọrọ ma tụọ gị nsonaazụ ka ị wee nwee ike irukwu ndị na-ege gị ntị.
Tags: nchịkọta ọdịnayacontent Marketingcuratanhazicuration ngwaikpo okwu